Dị ka e kọrọ site Econsultancy, online music gụgharia amụbawo okpukpu abụọ na 2013 na gụgharia ndenye aha ọrụ ndị dị ka Spotify, Google Play eruwo £ 103m. Ma e nwere ndị ka ndị pụrụ ahọrọ ibudata gụgharia ọdịyo na-ege ntị music offline na ha obere ngwaọrụ.
N'ezie, ọ bụghị na-apụtakarị ịchọta a ngwá ọrụ na-enye anyị ohere download music niile nkwanye saịtị nke nwere ike nwere ihe pụrụ iche nche jikoro. Otú o sina dị, anyị nwere ike na-amalite a ndekọ ngwá ọrụ weghara gụgharia ọdịyo ma ọ bụ music dị nnọọ site na ụda kaadị na kọmputa.
Olee otú ịhọrọ a oké ndekọ ngwá ọrụ gị?
N'ebe a, anyị ga-enye okwu mmeghe ma freeware na akwụ ụgwọ software. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ idekọ nkwanye audio mgbe ụfọdụ, i nwere ike na-agbalị freeware ezie na ị pụrụ ịdị mkpa ka ntọala na arụmọrụ ghara-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ a ngwá ọrụ nanị mere maka Ndekọ nkwanye audio, nke nwekwara ike iyo si mgbasa ozi na mata music ọmụma amamihe, anyị na-atụ aro ka ị na-agbalị na ugwo software iji hụ mma arụmọrụ ma nzi oru nkwado.
Part 1: Download music free na TunesGo, Mee music saịtị dị ka gị ọbá akwụkwọ
Part 2: Free gụgharia ọdịyo ndekọ software
Nkebi nke 3: ugwo nkwanye ọdịyo ndekọ software
Nkebi nke 4: Comparison nke gụgharia ọdịyo ndekọ ngwaọrụ
E nwere di na nwunye nke free ndekọ ngwaọrụ ike ịbụ na aka nke ukwuu. Ma ọtụtụ n'ime ha mkpa ụfọdụ mgbagwoju anya ntọala na ebe ọ bụ na ha bụ ndị free, ha adịghị mgbe nwere mmelite. Ihe bụ ihe ọzọ, ha ga-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ ị na-apụghị atụgharị mmadụ maka enyemaka. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ mkpa ka ịdekọ ọtụtụ nkwanye songs, a ngwaọrụ nwere ike ịbụ gị nhọrọ. Ka lelee ngwaọrụ n'okpuru.
Audacity bụ na-emeghe isi audio nchịkọta akụkọ na kọmputa ụda-edekọ ihe. Ọ na-akwado Windows, Mac OS X, Linux na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihi na a free ngwá ọrụ, n'ezie, ọ nwere ọtụtụ ezi atụmatụ, dị ka edezi ụda, multitrack Ịgwakọta na ndekọ na-ada.
Nzọụkwụ nke na-eji Audacity idekọ gụgharia audio:
Ego nzọụkwụ n'okpuru na ihe ọmụma zuru ezu, ị nwere ike na-ezo aka Audacity si nkuzi.
Nzọụkwụ 1: mkpa ka ị mbụ nwee gị ụda ngwaọrụ na-enwe ike idekọ kọmputa playback na-ahọrọ ọsọ ọsọ na Audacity na-ụda ngwaọrụ ọsọ ọsọ maka Ndekọ kọmputa playback. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na nke a, na-eso a ndu ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows arụ ọrụ usoro.
Nzọụkwụ 2: mkpa ka ị atụgharị Software Playthrough apụ. Gaa na ndekọ na peeji nke nke Audacity Mmasị ime nke a.
Nzọụkwụ 3: mgbe ihe nile dị njikere, pịa Record bọtịnụ na-amalite na-egwu gụgharia ọdịyo. Pịa Kwụsị na ọgwụgwụ.
Nzọụkwụ 4: pịa Export ịzọpụta dere audio dị ka WAV ma ọ bụ AIFF usoro. Ọ na-mere.
2. Free Sound teepu
Free Sound edekọ bụ ọzọ ndekọ olu software for free. Ọ na-akwado Ndekọ nkwanye internet ọdịyo ma ọ bụ audio si DVD, ochie cassettes ka MP3, WMA ma ọ bụ WAV format ozugbo. Ị nwere ike inye ya a-agbalị.
Nzọụkwụ nke na-eji Free Sound teepu idekọ nkwanye audio
Nzọụkwụ dị nnọọ mfe. Nnọọ na-eso anyị na-ahụ otú iji ya conveniently.
Nzọụkwụ 1: mbụ emeghe igwekota window nke usoro ihe omume na-ahọrọ ndekọ ngwaọrụ. Pịa Nhọrọ ka ịtọọ oge gị na ndekọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-ahọrọ mmepụta File Ụdị na General ntọala.
Nzọụkwụ 2: pịa Malite Ndekọ button na-egwu online music-amasị gị.
Nzọụkwụ 3: pịa ịkwụsị ndekọ rụchaa ọrụ a na mgbe ahụ, ị nwere ike ịlele dere na faịlụ site na ịpị File List bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ị na-idekọ nkwanye audio ụbọchị ndụ gị, ọ na-atụ aro iji nweta a na-akwụ ụgwọ ndekọ usoro ihe omume na mma arụmọrụ na oru nkwado. Ndị a na-akwụ ụgwọ omume nwere ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface na-enyere gị rụchaa ọrụ gị na nkeji. Ha dị nnọọ mfe na-eji dị ka mma. Lee ụfọdụ n'ime ha na ị ga-enye ha a ogbugba.
Nke a na usoro bụ dị ọnụ ala otu na ahịa ma o nwere dị ka ọtụtụ atụmatụ dị ka ndị ọzọ. Ọ nwere ike dee nkwanye music kpọmkwem site na kọmputa gị. Ihe ị na-anụ bụ ihe ị ga-esi. Ị nwere ike iji ya ịtọọ oge na music na ndekọ na conveniently nyefee dere MP3 faịlụ ka iTunes. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ enye gị ohere ike ụdaolu na kwa ịmepụta listi ọkpụkpọ. Mụtakwuo >>
Nzọụkwụ nke na-eji Streaming Audio Recorder idekọ nkwanye audio
E nwere nanị atọ nzọụkwụ tupu ị nwere ike nweta ihe dere MP3 faịlụ. Ndị na-esonụ bụ a nchịkọta na i nwere ike na-atụgharị isiokwu a n'ihi na ihe ọmụma.
Wụnye na-agba ọsọ ahụ Streaming Audio Recorder
Record gụgharia audio
Nyefee dere ọdịyo ma ọ bụ music ka iTunes
SoundTap ndia audio egwuri na kọmputa gị ma na-azọpụta faịlụ ka WAV ma ọ bụ MP3 usoro. Ọ nwekwara ike idekọ internet redio webcasts, ọdịyo na-agbasa ozi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nzọụkwụ nke na-eji SoundTap Streaming Audio Recorder idekọ nkwanye audio
Ka anyị hụ otú iji SoundTap idekọ nkwanye audio mfe.
Nzọụkwụ 1: wụnye na-agba ọsọ SoundTap SAR wee pịa Malite ndekọ na-njikere.
Nzọụkwụ 2: aga ọkacha mmasị gị gụgharia music saịtị na-egwu music na mgbe ahụ usoro ihe omume ga-amalite ibudata gụgharia music.
Nzọụkwụ 3: pịa ịkwụsị ndekọ ịrụcha na ndekọ na ị nwere ike igwu egwú na a usoro kwa.
Anyị na-ekwu banyere anọ ndekọ omume n'elu na i nwere ike na-eso nzọụkwụ na-gụgharia audio dere. Ndị na-esonụ ga-a tụnyere nke anọ ngwaọrụ-enyere gị mma ikpebi nri onye ịhọrọ. Lelee ya.
WAV ma ọ bụ AIFF
MP3, WMA ma ọ bụ WAV
MP3 ma ọ bụ M4A
WAV ma ọ bụ MP3
Intelligent Music Ịghọta
Suitablity maka ndekọ Songs
Olee otú Record Live365 Radio maka anọghị n'ịntanetị playback
Olee otú iji tọghata AVCHD ka H.264 Files
WebM Encoder: Olee encode WebM Files
> Resource> tọghata> Olee weghara, Record, Download na Save gụgharia Audio ma ọ bụ Music maka Free